पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्युको रहस्य खुल्यो ! -
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्युको रहस्य खुल्यो !
काठडमाडौँ। होटलमा झुण्डिएको अबस्थामा मृत फेलापरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको हत्याको रहस्य खुलेको छ । उनको मृत्यु रवि लामिछाने र उनको टिमका कारण भएको प्रहरीले प्राप्त गरेको प्रमाणले देखाएको छ ।
पत्रकार पुडासैनीले अडियो सन्देश छाडेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले पत्ता लागाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पत्रकार पुडासैनीको मोबाइलको मेमोरीमा उनले आत्महत्या रोज्नुको कारणबारे बताएको अडियो भिडियो भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनास्थलबाट माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार रामेश्वर सापकोटाका अनुसार मोवाइलमा उनको भिडियो संदेश भेटिएको बताए ।
उनले मोवाइलमा छोडेको संदेशमा भनिएको छ, ‘मलाइ रवि लामिछाने र दीपक दाजुले पछिल्लो पटक धेरै नै ट्रचर दिनुभयो । उहाँहरूले करोडौँ रूपैयाँ कमाउने तर मलाइ कममात्र पैसा दिने । पछि मलाइ अष्ट्रेलिया डिपेन्डेन्ट भिषामा पठाइदिने भनेर एक जना केटीको पछि लगाए । तर त्यहीक्रममा मैले न्यूज २४ टेलिभिजन छाडे पनि । र पछिसम्म मलाइ उहाँहरूले त्यही केटीलाइ बलात्कार गरेको भनेर फसाउने रणनीति बनाउनु भयो । त्यसकारण म अब संसारमा यस्तैगरी बाँचिरहन चाहन्न।’
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ घर भएका शालिकराम पुडासैनी चितवनको कंगारू होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । पत्रकार पुडासैनी सोमबार राति नै झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन । प्रहरीले उनको साथमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा उनको आफन्तलाइ राति नै खबर गरेपछि उनीहरू चितवन गएका थिए । उनी नाइलनको डोरी पंखामा पासो लगाएर झुण्डिएका थिए ।
लामो समय रवि लामिछानेसँग सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रममा काम गरेका पुडासैनी केहीसाता अघिमात्र माउण्टेन टेलिभिजनमा गएका थिए । उनी टेलिभिजनको उच्च व्यवस्थापनसँग सीधा सम्पर्क गरी मिसन न्युजमा काम गर्न पुगेका थिए । उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनैले लिएका थिए । चितवन पनि उनी रिपोर्टिङकै लागि पुगेका थिए।
आफ्नै साथिले दिउँसो भोज खुवायो, साँझ ज्या’न खा’यो
दुखद खबर ! विवाह गर्न नमान्दा डाक्टरले गरे आफ्नै प्रेमिकाको घाँ’टी थिचे’र…
सीतापाइलामा युवतीमाथि ए’सिड प्र’हार गर्ने दुईजना जे’ल चलान
बला’त्कार पछि ते’जावले जलाएर किशोरीको ह’त्या !
मन्दिरका पुजारीलाई गो’ली हा’नी ह’त्या